❤️ Kulungiswe Isitudiyo Sesitezi sesi-8 eMahana!! ❤️
I-i-condominium (condo) ephelele ibungazwe ngu-Louis
I-Mahana iyindawo enokuthula futhi i-Unit 802 iphakeme ngaphezu kwezihlahla zesundu, ukuze uthole umbono ovulekile we-Ocean obheke iziqhingi ezingomakhelwane i-Molokai ne-Lanai. Ilungele ukubuka imikhomo noma ukuphumula embhedeni wasemini ku-lanai.
Ukufakwa phansi okusha kwe-vinyl okunethezeka kuyo yonke indawo, upende omusha, kanye ne-drapery entsha enomugqa omnyama wokulala. Futhi igcwele yonke into izivakashi zethu ezizoyidinga ngeholide elihle, okuhlanganisa izihlalo zasolwandle, isambulela, amalineni kanokusho, insipho ye-L'Occitane namashampoos.
I-Mahana iyindawo ye-Oceanfront condo resort ekugcineni enyakatho ye-Kaanapali Beach, enomuzwa wangempela we-Old Hawaiian kanye nokwakheka kwezwe okuvuthiwe. I-canopy yesihlahla ngasemnyango we-The Mahana iwunikeza indawo yothando nezipholele. Ingamafidi angu-50 ukusuka e-Ocean futhi wonke ama-condo anovulandi bezingilazi ezizimele, okuvumela ukubuka okumangalisayo kwe-Lanai ne-Molokai. Indawo esebhishi lase-Kaanapali ilungele ukushiswa yilanga, uku-snorkeling, noma ukuphumula nje echibini. Kukhona uhambo lolwandle oluhle olukuyisa eBlack Rock naseWhaler's Village. Asinayo indawo yokudlela e-The Mahana, kodwa ekaDuke ingamakhelwane e-Honua Kai futhi kunezindawo zokudlela eziningi ezitholakala endaweni eyibangana nje, kanye ne-Times Market kanye ne-Farmer's Market.
I-condo yethu ehlanzekile futhi egcwele kahle inakho konke ozokudinga ngeholide elikhumbulekayo nelipholile, okuhlanganisa:
- I-Central Air Conditioning
- Umbhede wenkosi onephedi kamatilasi wegwebu kanye namashidi kakotini waseGibhithe.
- Izinsiza zokugezela ze-L'Occitane.
- I-inthanethi ye-Wifi ethuthukisiwe enesivinini esikhulu
- I-50 inch 4K Roku TV ene-High Definition Programming, i-Hulu, i-Disney+, i-ESPN, ne-Netflix!
- Izihlalo zasebhishi zikaTommy Bahama kanye nesambulela, amathawula olwandle, nokupholile ongakusebenzisa
- Ibhodi loku-ayina, insimbi, isomisi sezinwele, ama-binoculars, nezincwadi zokuqondisa ze-Maui ukusiza ukuhlela uhambo lwakho esiqhingini
Uzothanda ichibi elishisayo le-The Mahana kanye ne-spa, izindlu zokugeza eziseceleni kwephuli ezinamashawa, inkundla yethenisi, inkantolo ye-shuffleboard, izindawo ezimbili ezihlukene ze-BBQ grill, kanye ne-PING YAMAHHALA! AYIKHO imali yokuqasha lapho uqashwa ngumnikazi.
5.0 ·65 okushiwo abanye
Indawo ephelele ekugcineni enyakatho ethule ye-Kaanapali Beach. I-snorkeling enkulu phambi kwendawo yokungcebeleka ogwini olunesihlabathi. I-Times Market ingaphansi kwemayela elingu-1/4 ku-Honoapiilani Highway, enxanxatheleni yezitolo enezinye izindawo zokudlela nezitolo zekhofi. Kukhona nezinye Izimakethe Zabalimi eduze. Kukhona indlela engasebhishi eqala eningizimu ye-The Mahana futhi ihamba amakhilomitha amabili, ukuya e-Hyatt. Izodlula e-Black Rock, e-Sheraton, nase-Whaler's Village.
Ngizolandela ukuze ngiqinisekise ukuthi izivakashi zikhululekile e-condo. U-Sonia Peters, uMphathi wethu Wezakhiwo, uhlala eduze, nakuba ngicela ungishayele ku-770-714-5258 uma kukhona engingakwenza ukuze ngisize.
ULouis Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: 440010990064, TA-185-261-2608-01